Apple Music vs iCloud Music Library vs Lugood Match
Waxyaabaha aad u baahan tahay inaad ogaatid ka hor inta Photos takhalusid ka iCloud
• kaabta - Ka hor inta aadan ka kaydinta iCloud / gurmad tirtirto sawiro aad, hubi in aad xoojiyaa tiirarkii warbaahinta dibadda ama meesha ka halkaas oo ay la raadsan karaa mar kasta oo loo baahdo. Haddii sidaa la sameeyo hubisaa in aad sawiro jecel aan weligiis iyo wanaag tageen.
• Saameynta All Apple Qalabka - saaridda sawiro ka yimid iCloud kaydinta / gurmad aad u dhawra ayaa iyaga soo celinta mar kasta oo loo baahdo iyo waxay khuseysaa dhammaan qalabka Apple la xidhiidha ku. Taasi waa sababta kale ee qaadashada gurmad ah oo dhan sawiro ka hor ay ka saareen iyaga waxaa muhiim ah.
• Action celin karin - Habka sawir xil-ka-aad xisaabta iCloud karamadooda iyo sawiro tirtiray aan laga soo celiyey aad taageeray haddii iyaga meel kale. Tan iyo markii ay tallaabo ka kaxayntu ay kaga deyda oo dhan qalabka la xiriira, habka aan la hagaajin karo ka mid ka mid ah labada.
Sida loo Delete Photos ka iCloud Kaydinta / kaabta
Ka dib markii la fahmo cawaaqibka tirka sawiro ka iCloud kaydinta / gurmad iyo ka dib markii ay talaabooyin loo baahan yahay si looga hortago khasaaro xog kasta, waxaad kala socon kartaa tallaabooyinka hoos ku siiyey in ay tirtirto sawirada:
On aad Windows ama Mac computer, furo web browser jecel.
In bar cinwaanka, nooca www.icloud.com iyo saxaafadda gala . (Dabcan computer waa in la xiran internetka.)
On the Sign in si iCloud page, nooca ID aad iCloud iyo password in meelaha la xiriira ka dhacay gala .
On the xaqiijiyo aqoonsigaaga sanduuqa, guji in ay doortaan qalabka ku kalsoon ka mid ah liiska ay u helaan code sugida ah.
Guji Next dhankiisii ​​top-saxda ah ee sanduuqa.
Fiiro gaar ah : Tallaabooyinka 4 iyo 5 noqday khasab haddii aad karti Laba-Step Xaqiijinta ama Laba-Factor HUBINTA on ID Apple aad. Haddii aan, waxaad aan doonaynin in la soo baxdo xaqiijinta aqoonsiga.
On the gala Xaqiijinta Code sanduuqa, oo ah berrimmadii heli karo, ku qor code xaqiijinta in aad ka heshay Apple qalabka loo doortay ku kalsoon tahay in tallaabo 4.
Marka sameeyo, ee ku qoran bogga ugu weyn, riix Photos icon.
Laga soo bilaabo sare oo ka mid ah Photos iCloud bogga, riix Qaasaali button xarunta.
Guji ka Photos All album ka bogga soo socda.
Laga soo bilaabo dhinaca kore ee bidix ee boga furay, guji Select Photos .
Riix in ay doortaan sawirada ka album in aad rabto in aad tirtirto.
Riix Delete ka bar buluug ugu sareysa.
On box xaqiijin soo baxa, riix Delete in ay tirtirto ee photos soo xulay aad kaydinta iCloud.
Sida loo ka iCloud ee Photo Stream Delete Sawiro
1. noqda on your iPhone ama iPad la xiriira ID Apple iCloud. (IPhone 4s waxaa halkan loogu isticmaalayaa.)
2. Adiga iPhone ee shaashadda Home tuubada, Settings .
3. Laga soo Settings uu furmo suuqa, ka jaftaa iCloud .
4. Laga soo iCloud uu furmo suuqa, ka jaftaa Photos .
5. Marka Photos suuqa kala kor u furmay, hel oo simbiriirixan ah My Photo Stream button bidixda.
6. box xaqiijin ah, tuubada Delete in meesha laga saaro dhammaan sawirrada ka iCloud ee Photo Stream.
Hal-Guji fasaxaysa Kaydinta More on Your iPhone
Inkasta oo aad lacag la'aan ah karo ilaa aad iPhone ee kaydinta mar kasta oo aad rabto, habka weli adag ilaa iyo inta aad isticmaasho wax qalab nadiifinta dhinac saddexaad ku ool ah. Wondershare Shaqo weyn oo lagu horumarinayo SafeEraser in aan kaliya ka caawiyaa ilaa aad nadiifiso kaydinta gudaha iPhone ee hal-riix laakiin sidoo kale wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ay tayadoodii qaab aad telefoonka ee la fogeynayo xogta aan loo baahnayn iyo junk ka.
A sifooyinka muhiimka ah ee yar Wondershare SafeEraser dalabyo kala yihiin:
• masixi All Data - Doorashadan waxa ka caawiyaa ilaa aad nadiifiso aad iPhone by tirtiro xogta oo dhan iyo samaynta telefoonka sidii cusub.
• masixi tirtiray Files - Habkaani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si buuxda oo dhan files hore u tirtiray baabbi'in. Iyada oo ay taasi, faylasha tirtirayaa noqon unrecoverable oo sidaas daraaddeed warbixin-shaqsiyeedkaaga ma dhici kartaa qof kasta oo aan la rabin.
• masixi Data gaarka ah - waa in aad rabto in aad ka saarto xogta gaarka kuu ah sida Safari cookies, khasnado Safari, ama taariikhda Safari ka iPhone, doorashooyinkan waa aad u.
• Space Saver - feature Tani waxay kaa caawinaysaa in aad cadaadin oo sanamyadeedii ku kaydsan aad iPhone ee kaydinta. By sidaas samaynaya, waxaad soo kaban karto, qadar badan oo ah meel lagu kaydiyo qalabka aad.
Isticmaal SafeEraser Wondershare inay Qabtaan One-Guji Nadiifinta
Isticmaal links kor ku xusan in ay soo baxdo iyo rakibi version saxda ah ee Wondershare SafeEraser sida your computer. (A computer Windows halkan loo isticmaalo Screenshot iyo bandhig.)
Burcad SafeEraser Wondershare by double-gujinaya ay icon.
Laga soo bilaabo interface ugu weyn, riix 1-Guji Cleanu p button (la icon ah Gaetano a).
Sug ilaa SafeEraser Wondershare uu baaritaanku u files in la tirtiri karaa inuu ka soo kabsado meel lagu keydiyo iyo tayadoodii iPhone ayaa qaab ciyaareed.
Marka sameeyo, hubi checkboxes matalaya faylasha iyo xogta in aad dooneyso in aad ka saarto ka iPhone.
Riix nadiifinta dhankiisii ​​midig hoose.
Sug ilaa SafeEraser Wondershare ilaa nadiifiyaa xogta la rabin.
Close Wondershare SafeEraser.
Guuleysatey aad iPhone u horumarinta.
Nadiifinta aad iDevice iyo kabsaday meel ay kaydinta noqon karaa mid aad u fudud iyadoo la kaashanayo ah qalab dhinac saddexaad ku ool ah. Thanks to Wondershare horumarinta codsi dhan-in-ka mid ah, si ay nolol qof walba si fudud.
> Resource > iCloud > Sida loo Delete Photos ka iCloud